သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် စကားလုံး (၁၃) လုံး - အပိုင်း (၁) - Myanmar Network
သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် စကားလုံး (၁၃) လုံး - အပိုင်း (၁)
Posted by Language Republic on December 7, 2015 at 11:51 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျောင်းနေစဉ်ကာလတစ်လျှောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျောင်း၏ အိမ်စာတာဝန်များ ရေးသားလာခဲ့ပြီးနောက်တွင် သင်၏ စာစီစာကုံးများတွင် စကားလုံးသုံးရန် ရွေးချယ်သောအခါ သုံးဖူးပြီးစကားလုံးများကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်သုံးမိခြင်း စတင်ဖြစ်လာပါသည်။ သို့သော် သင်၏အင်္ဂလိပ်ဆရာအား သင့်ကို အထင်ကြီးသွားစေရန် သေချာစေမည့် စကားလုံးများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည့် ဘာသာစကားရပ်ကြီး တစ်ခုလုံးရှိနေပါသည်။ ဆရာများသည် အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်တွင် “good (ကောင်းသော)” ၊ says (…ဟုပြောသည်) နှင့် thinks (…ဟုထင်သည်) ကဲ့သို့သော သာမန် စကားလုံးများသာ ဖတ်နေရခြင်းကို ငြီးငွေ့နေပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နောက်တစ်ခေါက် သင်၏ စာစီစာကုံးများတွင် အသုံးပြုရန် ဤ တောက်ပြောင်သော စကားလုံးများအား စိတ်ထဲတွင် ထားပေးပါ။
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ။ (နာမ်) ရေတွက်၍မရသော သို့မဟုတ် အလွန်အမင်းများပြားသော အရေအတွက်
အစားထိုးနိုင်သော စကားလုံး -alot (မြောက်မြားစွာ)
Myriad သည် သင်၏ စာစီစာကုံးများတွင် အသုံးပြုရန် အတောက်ပြောင်ဆုံး စကားလုံးများထဲမှ တစ်လုံးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာစီစာကုံးများတွင် “alot of example” (ဥပမာများစွာ)၊ သို့မဟုတ် “many experiences” (အတွေ့အကြုံများစွာ) စသဖြင့်ကဲ့သို့သော အသုံးအနှုန်းပုံစံမျိုးနှင့် သုံးလေ့ရှိပါ သည်။ သို့သော် ထိုသို့သုံးနှုန်းခြင်းသည် သင်၏ စာစီစာကုံးအား သင့်ဆရာ၏အမြင်တွင် ထင်းကနဲ ဖြစ်သွားစေမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ ဆရာအား စိတ်ပျော်ရွင်သွားစေချင်သည်ဆိုပါက သင်၏စာစီစာကုံးတွင် ဤစကားလုံးပါဝင်စေရန် သေချာစွာပြုလုပ်ပေးပါ။ နမူနာ ၀ါကျတစ်ခုအနေ နှင့် …The author suggestsamyriad of solutions for the problem. ” (စာရေးသူသည် ထိုပြဿနာအတွက် ဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာ အကြုံပြုခဲ့ပါသည်။)
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ။ (ကြိယာ) အချက်အလက် သို့မဟုတ် ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကို ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနှင့် ရဲ့ရဲ့ဝင့်ဝင့် တင်ပြသည်။
အစားထိုးနိုင်သော စကားလုံး - says (…ဟု ပြောသည်။)
သင်၏ စိတ်အတွင်းရှိ အဘိဓာန်ထဲသို့ ပေါင်းထည့်ရမည့် နောက်ထပ် အလွန်တောက်ပြောင်သည့် စကားလုံး တစ်လုံးမှာ “asserts” ဖြစ်ပါသည်။ ဤကြိယာစကားလုံးသည် အခြားသုံးနှုန်း၍ရသော စကားလုံးဖြစ်သည့် says (…ဟုပြောသည်) ထက် များစွာပိုမို၍ အားအင်ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းကို ရေးသားသုံးနှုန်းသောအခါ သင့်အား စကားလုံးရွေးချယ်မှု အလွန်ကျွမ်းကျင်သည့် ဆရာကြီးလေသံမျိုးပေါက်စေမည် မဟုတ်ပါ။ asserts အား အခြေအနေ များစွာတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း မကြာခဏ ပြောလွန်းသဖြင့် “says” ကဲ့သို့ ထပ်ခါထပ်ခါ ပါနေသည့် အသုံးအနှုန်းမျိုးဖြစ်သွားသည်အထိ မသုံးနှုန်းမိစေရန် သတိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ asserts ဟူသောစကားလုံးနှင့် ကွက်တိဖြစ်မည့် နမူနာတစ်ခုမှာ “ The author asserts that the issue is lacking simple solutions.” (ဤပြဿနာတွင် ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းနည်းများ မရှိကြောင်း စာရေးဆရာက အခိုင်အမာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ခဲ့ပါသည်။)
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ။ (နာမ၀ိသေသန) ထင်ထင်ရှားရှားကိုပင် ဆိုးဝါးသော၊ ထိတ်လန့်ဖွယ်ဖြစ်သော။
အစားထိုးနိုင်သော စကားလုံး - bad (ဆိုးဝါးသော)
စာသံပေသံဆန်သော စကားလုံး မျိုးဖြစ်သည့် “egregious” သို့အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲသုံးနှုန်းနိုင်သောအခါမျိုးတွင် အဘယ်ကြောင့် bad (ဆိုးဝါးသော) ကဲ့သို့သော နာမဝိသေသနမျိုးကို သုံးမည်နည်း။ ဤစကားလုံးသည် သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအား အထင်ကြီးစေမည်မှာ သေချာလှသည်ဖြစ်သောကြောင့် သင်၏ နောက်ရေးမည့် စာစီစာကုံးတွင် ထည့်သုံးရန် သတိရသင့်ပါသည်။ “bad” ကို အစားထိုးနိုင်သည့် စကားလုံးပေါင်းမြောက်များစွာ ရှိသော်လည်း၊ ဥပမာ “dreadful” (ကြောက်စရာကောင်းသော) နှင့် terrible (အလွန်ဆိုးဝါးသော)ကဲ့သို့၊ “egregious” သည် ကျွန်ုပ်၏ အကြိုက်ဆုံးစကားလုံးများထဲမှ တစ်လုံးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် လျှာမှ လိမ့်ဆင်းထွက်သွားပြီး၊ သင့်အား စာပေ ကျမ်းဂန်တတ် ပါရမီရှင်တစ်ဦး လေသံမျိုး ပေါက်စေပါ သည်။ နမူနာဝါကျတစ်ခုအနေနှင့် “The author asserts that other solutions to the problem are simply egregious.” (စာရေးသူက ဤပြဿနာ၏ အခြား ဖြေရှင်းနည်းအားလုံးတို့သည် ရိုးစင်းစွာပင် ဆိုးဝါးကြောင်း ခိုင်မာစွာ တင်ပြထားပါသည်။)
Teen.allwomenstalk.com မှ Sabrina Yates ၏ 13 Words to Use in Your Essays to Impress Your English Teacher ... ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် စကားလုံး - အပိုင်း (၁)
အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် စကားလုံး - အပိုင်း (၂)
အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် စကားလုံး - အပိုင်း (၃)
အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် စကားလုံး - အပိုင်း (၄)
အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် စကားလုံး - အပိုင်း (၅)
အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် စကားလုံး - အပိုင်း (၆)
Permalink Reply by htaylim on December 7, 2015 at 13:39
Permalink Reply by Aung Khant Thaw on December 7, 2015 at 14:56
Permalink Reply by Sandy Thann on December 7, 2015 at 23:18
Permalink Reply by Shinn Zarchi on December 8, 2015 at 9:07
Permalink Reply by Richard Michael William on December 8, 2015 at 15:21
Permalink Reply by Harry Apple on December 14, 2015 at 17:36
Permalink Reply by Me Me Khaing on February 11, 2016 at 10:37
Let me know we can use 'assert' instead of 'recommend'.
Permalink Reply by Hinnwai Oo on April 22, 2016 at 15:06